အလင်းကိုအာရုံခံ, Thermal အာရုံခံ, ခန္ဓာကိုယ်အာရုံခံ, Fresnel မှန်ဘီလူး, နှိုးစက်အာရုံခံစနစ် - Haiwang
မိုက်ခရိုဝေ့အာရုံခံ module တစ်ခု
အပူ / photosensitive အာရုံခံကိရိယာ
PMMA Fresnel နေရောင်ခြည်မှန်ဘီလူး
SOG Fresnel မှန်ဘီလူး
wide-angle Fresnel မှန်ဘီလူး
ဇာတ်စင် / ယာဉ်အသွားအလာ / LED ကိုမှန်ဘီလူး
ကောင်းသောအရည်အသွေး, အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်စျေးနှုန်းများ, ယဉ်ကျေးဝန်ဆောင်မှုဖောက်သည်ကျေနပ်မှု
3mm LDR အာရုံခံကိရိယာ
ဇာတ်စင် Fresnel မှန်ဘီလူး
Shenzhen HaiWang အာရုံခံ Co. , Ltd
သာလွန်အရည်အသွေးအခြေခံအုတ်မြစ်တည်ဆောက်, ချွေ Service ကိုဖောက်သည်ရဲ့အကြွေးအနိုင်ရ
ရိုးသားမှု, Superior အရည်အသွေး, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ဦးဝင်း-Win နည်းဗျူဟာ
လူ့ပိုင်ဆိုင်မှု, ဖောက်သည် oriented, ဖောက်သည်ပထမဦးဆုံးကျေနပ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့စံဖြစ်ပါတယ်။
အခနျး ONE ။ ဂုဏ်သတင်း
2004 ခုနှစ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့ရှန်ကျန်း Haiwang အာရုံခံ Co. , Ltd, 10 နှစ်ကျော်လူ့ရှာဖွေရေးအစိတ်အပိုင်းများ, နီအောက်ရောင်ခြည် / ခရိုဝေ့ဖ် module တွေနှင့်အခြားအထိခိုက်မခံအစိတ်အပိုင်းများဖွံ့ဖြိုးဆဲ, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ပို့ကုန်ထံအပ်နှံသည်။ စံချိန်စံညွှန်းမီစီမံခန့်ခွဲမှု, တင်းကြပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု, ပရော်ဖက်ရှင်နယ် R & D အသင်း, ကောင်းသောယုံကြည်ခြင်း, ဆက်ကပ်အပ်နှံကျွမ်းကျင်ပိုင်နှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုအပြည့်အဝအကွာအဝေး၏လည်ပတ်မှုနိယာမထောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဖောက်သည်အကြားနာမည်ကောင်းအနိုင်ရ။ ဒါ့အပြင်ပိုပိုပြီးဖောက်သည်ကိုထောကျပံ့ဖို့ လာ. ငါတို့ကို tmst ။ ဤသည် Haiwang ကြီးထွားခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆက်လက်စေသည်။
ကျနော်တို့စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်အသိဉာဏ်ထုတ်ကုန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ထုတ်လုပ်မြှုပ်နှံနေကြတယ်။ ကျနော်တို့ရှာဖွေစူးစမ်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် Fresnel မှန်ဘီလူးပေါ်လမ်းကြောင်း, thermistors, photoresistor ရှာတွေ့မှကျူးလွန်နေကြသည်။ အလင်းအာရုံခံကိရိယာများ, အနီအောက်ရောင်ခြည်အာရုံခံကိရိယာများ, မိုက်ခရိုဝေ့အာရုံခံကိရိယာများ, အပူချိန်အာရုံခံကိရိယာများနှင့်လယ်ပြင်၌အခြားထုတ်ကုန်များ။ ဒါဟာငါတို့ဧရိယာအတွက်ဦးဆောင်အဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့စေသည်။ ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်နိုင်အောင်အပေါ်အလင်းရောင်စက်မှုလုပ်ငန်း, အများပြည်သူလုံခြုံရေးစက်မှုလုပ်ငန်း, ကြော်ငြာမီဒီယာ, traffic ကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အသုံးပြုကြသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့ဖောက်သည်ထံမှကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့အညီ OEM ပူဇော်ကြဘူး။ ကုန်ပစ္စည်းများကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ထံမှကျယ်ပြန့်အသိအမှတ်ပြုခြင်းနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံစား, လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှန်းကျင်ရောင်းချကြသည်။
Haiwang ဖို့ကိုစောင့်ထိန်း "တီထွင်ဆန်းသစ်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်, အရည်အသွေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏အခြေခံဖြစ်ပါတယ်" နှင့် "ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကို။ အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်စျေးနှုန်းများ, ယဉ်ကျေးဝန်ဆောင်မှု။ ဖောက်သည်ကျေနပ်မှု" ဟုအဆိုပါ purpose.We များအတွက်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားဖောက်သည်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးရှာမယ်လို့မျှော်လင့်ကြဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျှော်မှန်းချက်: ကမ္ဘာ့ဖလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖန်တီးမှုအသစ်ထောက်လှမ်းရေးပိုမိုကောင်းမွန်သောဘဝကိုသိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Value ကို: Superior အရည်အသွေးကိုအခြေခံအုတ်မြစ်တည်ဆောက်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖောက်သည်ရဲ့အကြွေးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်: ရိုးသားမှု, Superior အရည်အသွေး, ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်ဦးဝင်း-Win မဟာဗျူဟာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အယူအဆများ: ပြည်သူ့-oriented, ဖောက်သည်-friendly, ဖောက်သည်ပထမနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု「စံချိန်စံညွှန်းများအူရားနေကြသည်။
နေ့စွဲ: ဧပြီ 13 ဧပြီ 16, 2018. ရာဌာနမှ: ဟောင်ကောင်ကွန်ဗင်းရှင်းများနှင့်ပြပွဲစင်တာတွင် Booth: 5C-A38
နေရပ်လိပ်စာ: ROOM တွင် 1004, အနောက်-CBD, No.139 Binh လမ်း, Futian ခရိုင်, ရှန်ကျန်း, တရုတ်